WestJet dia nanonona VP mpanatanteraka vaovao sy Lehiben'ny Loyalty Officer
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » WestJet dia nanonona VP mpanatanteraka vaovao sy Lehiben'ny Loyalty Officer
Schuster dia manana traikefa momba ny tsy fivadihana 19 taona mahery, ao anatin'izany ny enin-taona amin'ny maha-Tale Jeneralin'ny Mpanatanteraka (CEO) an'ny Velocity Frequent Flyer, programa mahatoky an'i Virgin Australia.
WestJet androany dia nanambara ny fanendrena an'i Karl Schuster, ho filoha lefitry ny mpanatanteraka sy ny Lehiben'ny Loyalty Officer (CLO). Schuster dia hiaraka amin'ny ekipa mpitarika mpanatanteraka WestJet amin'ny fiandohan'ny taona 2022, aorian'ny fahavitan'ny fizotry ny fifindra-monina.
Schuster dia manana traikefa momba ny tsy fivadihana 19 taona mahery, ao anatin'izany ny enin-taona amin'ny maha-Tale Jeneralin'ny Mpanatanteraka (CEO) an'ny Velocity Frequent Flyer, programa mahatoky an'i Virgin Australia. Nandritra ny fotoana niasany tao amin'ny Virgin Australia, Schuster dia nampitombo ny Velocity ho iray amin'ireo fandaharan'asa mahatoky lehibe indrindra any Aostralia, izay mampitombo be ny fidiram-bolan'izy ireo isan-taona; mampitombo ny isan'ny mpikambana ho 10 tapitrisa, raha 5.3 tapitrisa ny mpikambana teo aloha; ary mitombo ny fiaraha-miasa amin'ireo marika malaza manerana ny firenena. Talohan'ny nandehanany tao amin'ny Velocity, Schuster dia nitarika fandaharana tsy fivadihana nandritra ny taona maro ho an'ny Qantas, British Airways sy Malaysia Airlines ary nanome toro-hevitra ho an'ny zotram-piaramanidina isan-karazany nandritra ny efa ho 15 taona niasany tao amin'ny Aimia Inc.
"Manana tantara mahavariana i Karl amin'ny fampivoarana ny fitomboana isan-karazany ho an'ny fandaharan'asa mahatoky isan-karazany ary mitondra vokatra amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy paikady," hoy i Harry Taylor, WestJet Filoha vonjimaika sy CEO. “Tsy andrinay ny handraisana an'i Karl ao amin'ny WestJet; hanandratra ny fandaharan'asan'ny tsy fivadihan'i WestJet ho amin'ny haavo vaovao ny traikefany malalaka.”
Ny CLO dia andraikitra vao noforonina ho an'ny zotram-piaramanidina, tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny fitomboana WestJetfandaharan'asa mahatoky, vokatra, serivisy ary fiaraha-miasa amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy fitarihana.
"Rehefa WestJet Miova avy amin'ny fanarenana mankany amin'ny fanitarana, manao fampiasam-bola lehibe ny zotram-piaramanidina amin'ny fandaharan'asan'ny tsy fivadihana efa nahomby, ary faly aho fa tafiditra ao anatin'ny ekipa amin'ny fotoana tena manan-danja toy izany, ”hoy i Schuster. "Rehefa miverina matanjaka kokoa i WestJet, dia misy lalamby mahagaga eo anoloan'ny WestJet Rewards ary hiasa izahay mba hitondra tombontsoa sy tombontsoa bebe kokoa ho an'ny vahiny amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny tsy fivadihana mampientam-po sy manavao. Faly aho fa manatevin-daharana ny ekipan'i WestJet tsy mivadika miaraka amin'i d'Arcy Monaghan, filoha lefitry ny WestJet, Loyalty Programs ary manantena ny hiara-hiasa aminy sy ny ekipa hitondra ny fandaharanay amin'ny ambaratonga vaovao aho.
fampindramam-bola amin'ny trano cannabis hoy:
November 30, 2021 amin'ny 08: 08
Amin'ny maha-filoha sy lehiben'ny mpanatanteraka azy, dia izy no manara-maso ny paikadin'ny zotram-piaramanidina, ary koa ny filoha lefitra zokiny sy ny lehiben'ny varotra. Blaogy tena tsara Nahafinaritra ahy ny namaky azy Azafady mba zarao fampahalalana misimisy kokoa mendrika ny mamaky azy. Tsidiho ny Mobile App Development Company.